AGG bụ a si ọtụtụ mba Company lekwasịrị anya imewe, rụpụta na nkesa nke Power ọgbọ usoro na elu Energy solutions.Backed site si ọkachamara obodo dealer support, AGG Power bụ ika enye n'ụwa nile e mbịne maka tụkwasịrị obi na a pụrụ ịdabere na ime ike ọkọnọ .
Ahụmahụ anyị na-arụ ọrụ na isi rụọ, dị ka telecoms ụlọ ọrụ, na-edu anyị chepụta ogologo na-agba ọsọ mmanụ ụgbọala tankị na kwukwara nche n'uche.
Anyị mepụtara a ọkọlọtọ nso nke 500 na 1000 liter tankị, ma otu ma ọ bụ abụọ nwere mgbidi. N'ihi na onye ọ bụla nwere dị iche iche mkpa, anyị ọkachamara injinia nwere ike hazie anyị àjà izute gị onye chọrọ.
Site ụlọ ọrụ na-eduga akara usoro àjà remote nkwurịta okwu nchịkọta, anyị nwee ka i nyochaa na na-ejikwa gị na ngwá si ụlọ ọrụ ma ọ bụ mgbe na-aga n'ihu.
Ọtụtụ akara panel nchịkọta ugbu a Njirimara ama ngwa na-enye ohere onye generator set parameters na n'ịwa na Ịma Ọkwa nke ọ bụla mbipụta na site.Advance ihe ọmụma nke ihe nke na-enyere gị ndị ọzọ ọrụ kwesịrị ekwesị akụ, na-azọpụta egbughị nleta n'ikpeazụ, ego.
Copyright © 2019 AGG IKE Technology (UK) CO., LTD